Mgbe Kraịst Ga-abịa Ọzọ: Gịnị Ga-eme? Gịnị Ka Jizọs Ga-eme? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Tupu Jizọs Kraịst alaghachi n’eluigwe n’afọ 33, o kwere nkwa na ya ga-abịa ọzọ. O ji onwe ya tụnyere otu nwoke si n’ezinụlọ eze. Nwoke a gara njem nọọ ogologo oge. Mgbe ọ na-alọta, e nyere ya ikike ịbụ eze. Ihe mere Jizọs ga-eji abịa ọzọ bụ ka o wetara ụmụ mmadụ ezigbo ọchịchị.—Gụọ Luk 19:11, 12.
Jizọs ga-ewetara ụmụ mmadụ ọchịchị dị mma
Mgbe Kraịst ga-abịaghachi, ọ̀ ga-abụ mmadụ ka ọ̀ ga-abụ mmụọ? Mgbe a kpọlitere ya n’ọnwụ, ọ ghọrọ mmụọ laghachi n’eluigwe. (1 Pita 3:18) N’eluigwe, ọ nọdụrụ ala n’aka nri Chineke. (Abụ Ọma 110:1) Mgbe ọtụtụ afọ gachara, Jehova Chineke, bụ́ onye a na-akpọ “Onye Ochie ahụ,” nyere Jizọs ikike ka ọ chịwa ụmụ mmadụ. N’ihi ya, Jizọs ga-abụ Eze a na-anaghị ahụ anya mgbe ọ ga-abịa ọzọ, ọ bụghị mmadụ.—Gụọ Daniel 7:13, 14.
Gịnị ka Jizọs ga-eme mgbe ọ ga-abịa ọzọ?
Mgbe Jizọs ga-abịa ọzọ, ya na ndị mmụọ ozi ya ga-eso. N’oge ahụ, ọ ga-ekpe ụmụ mmadụ ikpe, bibiekwa ndị ajọ omume. Ma, ọ ga-enye ndị kwetara ka ọ chịwa ha ndụ ebighị ebi.—Gụọ Matiu 25:31-33, 46.
Ọchịchị Jizọs ga-eme ka ụwa ghọọ paradaịs. Jizọs ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ ka ha dịrị ndụ mgbe ahụ ụwa ga-aghọ paradaịs.—Gụọ Luk 23:42, 43.